XOG:- Ciidanka nabad-sugidda oo gacanta ku dhigay nin lacag badan kala dhoofi rabay dalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Ciidanka nabad-sugidda oo gacanta ku dhigay nin lacag badan kala dhoofi rabay dalka
Warar hoose aynu ka heleyno saraakiisha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidanka garoonka ku sugan ay gacanta ku dhigeen nin la sheegay inuu u shaqeeyo shirkadda xawaalada Amal Express, kaas oo boorso ku watay lacag dhan 1 milyan iyo shan boqol oo kun oo doollarka Mareykanka ah.
Ninkaasi oo ilaa iyo haatan aysan inoo suurto galin inaynu magaciisa helno ayaa waxaa wararka qaar waxay sheegayaan inuu lacagtaasi u waday magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland, halka warar kalena ay sheegayaan inuu u waday magaalada Dubai ee dalka Isku-taga Imaaraadka Carabta.
Shirkadda xawaalada Amal Express ayaa ka mid ah shirkadaha lacagaha la isugu diro oo ay Soomaalidu leedahay, waxayna shirkadaan dhawaan xarun Bangi ah ka furteen magaalada Muqdisho, mana kala cadda sababaha adeegga Bangiga ah loogu adeegsan waayay lacagtaasi faraha badan ee uu ninkaasi la safraayay.
Dhinaca kale, madaxda sare ee hay’adda sirdoonka qaranka ayaa la sheegay inay haatan gaareen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxayna warbixin ka dhageysteen saraakiishii qabtay ninkaasi u shaqeeya shirkadda xawaaladda Amal Express iyo kharashka caddaanka ee uu boorsada ku watay.
Sidoo kale, ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka Qaranka ayaa haatan wada baaritaan aad u xoogan oo ay ku ogaanayaan halka rasmiga ah ee loo waday lacagtaasi iyo sidoo kale howlaha loo adeegsan lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, dhowr jeer oo hore waxaa hay’addaha maaliyadda iyo ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya loogu baaqay inay adkeeyaan nidaamka xawaaladaha, waxaana si gaar ah farta loogu goday nidaamka ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah xawaaladaha Soomaalida.
Wixii xogtaan ku saabsan dib kala soco Insha Allaah
Al Shabaab militants blow up Safaricom mast in Garissa